Baro Sida Loo Dajiyo Hadaf - iftineducation.com
Baro Sida Loo Dajiyo Hadaf
Dajinta hadafkaagu waa inaad qorshe iyo aragti ka yeelato sida aad doonayso inaad noqoto mustaqbalkaaga. Si aad u dajiso haddaf ama qorshayaal waa inaad marka hore yeelataa riyo ama aad heshaa waxaad aad ugu jeelan tahay.rsz_hadaf
Riyadani waxay noqon kartaa waxay doonto sida inaad noqoto caalim diinta ku xeeldheer, nin lacag leh, inaad iibsato guri wayn iyo gaadhi amase aad noqoto madaxweynaha wadanka aad ku nooshahay.
Talaabada ugu horeysa ee dajinta hadafkaaga
Waxa ugu horeeya eed u baahan tahay inaad qabato si aad u dajiso hadafkaaga si sax ah waa inaad go’aansato waxaad dhab u doonayso. Waa maxay waxa haddii aad hesho badali lahaa noloshaada? Xaqiiqdii maxaad u baahan tahay? Waa maxay waxa haddii aad gaadhi lahayd kuu horseedi lahaa farxad.
Sawirashadu waxay kaa caawin kartaa inaad ogaato waxa aad doonayso. Waxaad fadhiisataa goob nafis ah oo aanad kala kulmayn wax ku qasa dabeeto ka fikir himiladaada mustaqbalka. Kadib marka aad sawirato himiladaada waa in hadafyada aa dajinaysaa noqdaan qaar ujeedkoodu yahay una shaqaynaya inaad ku gaadho himiladaada amase riyadaada.
Sharciyada lagu gaadho hadafkaaga
Waxaa jira sharciyo aad ugu muhiim ah inaad dajiso hadafkaaga kuwaasi oo ah:
Hadafkaagu ha noqdo mid aan fududayn balse la gaadhi karo: Hadafkaagu ha noqdo mid la gaadhi karo si aanad ugu malayn inaad khiyaamayso naftaada, sidoo kale yaanu noqon mid aad u adag si aanad ugu guuldaraysan inaad gaadho. Hadafkaagu waa inuu noqdaa mid tartan leh si uu kuu dhiirigaliyo, isla mar ahaantaana aanu noqon mid aan suurto gal ahayn si aanad u niyad jabin.
Hadafkaagu ha noqdo mid waqti ku xaddaysan: Si aad hadaf u dajiso waa inaad u yeeshaa waqti xadaysan. Sababtoo ah adiga laftaada ayuu cimrigaagu xadaysan yahay, lagama yaabo inaad noolaato boqolaal sano, noloshuna aad bay u gaabantahay, haddii aanad u samayn waqti hadafyadaadana waxaa dhici karta inaad noqoto qof aan dhiiranayn oo aan samayn wax isbadal ah.
Hadafyadaadu waa inay noqdaan qaar qiyaas leh: Kawaran haddaad tidhaahdo “Waxaan doonayaa inaan ku fiicnaado computer-ka?” Maxaad ula jeedaa markaad leedahay inaan ku fiicnaado? Waa inaad samaysataa hadafyo cad-cad sida inaad akhrido 40 mawduuc oo la xidhiidha cilmiga computer-ka inaad barato laba luuqadood oo programming-ka ah, hadafyadaada waa inaad u kala qaybisaa saddex qaybood oo kala ah hadafyada waqtiga dhaw, hadafyo waqti dhexe ah iyo hadafyo waqti dheer ah. Haddafyada waqtiga dhawi waa inay noqdaan qaar aad u gaar ah. Tusaale ahaan haddii hadafkaaga waqtiga dheeri uu ahaa inaad noqoto safiir, hadafyadaada waqti dhexe waa inay noqdaan inaad barrato saddex luuqadood, hadafyadaada waqtiga dhawna uu noqdo inaad xariif ku noqoto luuqada ingiriisiga sanadkan gudihiisa. Haddii hadafyadaadu noqdaan qaar aan qiyaas lahayn si fiican u gudan maysid hawshaada waxaana laga yaabaa inaad dareento inaad khasaartay. inaad dajisato hadafyo qiyaas lihi waxay kaa caawin karaan inaad gadho yoolkaaga.
Hadafyada waqtiga dheer: Waxa la ogaaday in dadka dajiya hadafyadooda waqtiga dheer ay guul ka gaadhaan hadafyadooda xagga dadka dajiya hadafyada waqtiga gaabani ay ku dhamaystaan wareer niyad jab iyo murugo.
Dajinta hadafkaaga iyo maamulida waqtigaaga
Badanaa marka laga hadlayo dajinta hadafkaaga arinta kale ee soo raacaysaa waa inaad barato sida loo maamulo waqtigaaga. Inaad barato sida saxda ah ee loo maamulo waqtigaagu waxay kaa caawin doontaa inaad awood u yeelato inaad waqtigaaga u maamusho sida ugu fiican tana waxay kugu hogaamin doontaa inaad u gaadho hadafkaaga si dhakhso ah.
Cabdirisaaq Faarax Cawad.
5 Wadan Oo Ay Aad U Adagtahay In Dhalasho Laga Qaato
Soomaaliya oo Noqotay Dalka Seddexaad ee Leh Qaxootiga Ugu Badan Caalamka